शोभा ज्ञवाली - | Nagarik News - Nepal Republic Media
शोभा ज्ञवाली १० आश्विन २०७७ शनिबार ११ मिनेट पाठ
केही महिना बित्यो, वसन्त ऋतु आइसकेको थियो। रश्मीले एउटा बैंकमा जागिर गर्न थालेकी थिइन्। एक बिहान, बुवा बैठक कक्षमा चिया पिउँदै पत्रिका पढ्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको आँसुले पत्रिका भिजिरहेको थियो।
शोभा ज्ञवाली ३ आश्विन २०७७ शनिबार १० मिनेट पाठ
झण्डै चार महिनादेखि सारा संसार कोभिड-१९ को विश्वव्याधिका कारण हल न चलको अवस्थामा छ । दिन प्रतिदिन कोभिड-१९ रोगका भाइरसबाट संक्रमित हुनेहरुको संख्या बढिरहेको छ ।
शोभा ज्ञवाली १५ श्रावण २०७७ बिहीबार ३ मिनेट पाठ
सुन्न नपाएको उत्तर
झन्डै वर्ष दिन पछि, एक दिन म त्यही कफी सपमा एक्लै कफी पिइरहेकी थिएँ। लामो दारीसहित मलिन अनुहार लिएर ऊ मतिर आइरहेको थियो, तर मलाई देख्नेबित्तिकै फर्कियो। मैले दिलमा चोट पाएको महसुस गरेँ। उसले किन नचिनेको जस्तो ग-यो ? सम्झिएँ– मैले नै उसलाई नभेट्न भनेकी थिएँ।
शोभा ज्ञवाली १० श्रावण २०७७ शनिबार ९ मिनेट पाठ
शोभा ज्ञवाली ८ श्रावण २०७७ बिहीबार ७ मिनेट पाठ
शोभा ज्ञवाली ४ श्रावण २०७७ आइतबार ६ मिनेट पाठ
जब गर्भमा सन्तान बस्छ, त्यतिबेलैदेखि आमामा सन्तानप्रति अगाध माया उत्पन्न हुन्छ। अर्थात आफ्नो सन्तानलाई माया दिनुपर्ने शिक्षा उनलाई कसैले दिनैपर्दैन। यही स्वतस्फूर्त उत्पन्न मायाको स्रोत जिन्दगीभर सुक्दैन। आफ्ना सन्तानप्रति मायाले अविरल सिँचित गर्न लालायित हुन्छिन् उनी।
शोभा ज्ञवाली ११ वैशाख २०७७ बिहीबार १० मिनेट पाठ
बुहारी भित्रिएको क्षण
आँखा अनायासै भित्ताको घडीमा पुगेछ, पेन्डुलमको चालसँगै सुईले संकेत गरेको थियो– रातको २बज्यो। कोही घुरिरहेका, कोही कोल्टे फेराइको प्रयास गर्दैत कोही मस्त निद्रामा थिए।
शोभा ज्ञवाली ८ चैत्र २०७६ शनिबार १३ मिनेट पाठ
शोभा ज्ञवाली २२ फाल्गुन २०७६ बिहीबार १९ मिनेट पाठ
शोभा ज्ञवाली २० फाल्गुन २०७६ मंगलबार ८ मिनेट पाठ
नारी संवेदनामा खेलबाड: कहिलेसम्म ?
महिला मनोरञ्जनका साधन हुन् ? ती र तिनका सवाल बिक्रीका वस्तु हुन् ? नारीका पीडा र वेदना पाठक/दर्शक तानेर आम्दानी बढाउने फिल्मी कहानी हुन् ?
शोभा ज्ञवाली ८ फाल्गुन २०७६ बिहीबार १४ मिनेट पाठ
माघे झरी तीन–चार दिनदेखि रोकिएकै थिएन । एक त माघ, त्यसमाथि झरी थपिएपछिको जाडोको के कुरा ! जाडोले कुँडुलिएर बस्नेहरुकै वाहुल्य थियो । घरिघरि झ्यालबाट बाहिर हेर्दा एकादुई प्राणी चलमलाएको देखिन्थ्यो । यस्तोमा बाहिर जाने मन कसैलाई थिएन भने पूजालाई त झन् केको हतारो होस् ।
शोभा ज्ञवाली १५ माघ २०७६ बुधबार १७ मिनेट पाठ
डेढ दशकयता सामाजिक सञ्जालहरुले हाम्रो दैनिक जीवनमा ठूलो प्रभाव ल्याएका छन् । कतिपय अवस्थामा यो प्रभाव सकारात्मक पनि छन् र कतिपय अवस्थामा नकारात्मक पनि ।
शोभा ज्ञवाली १३ माघ २०७६ सोमबार ७ मिनेट पाठ
आज कलेजबाट छिटो फर्केर खाना पकाइवरी खाना खाएर म आफ्नो कोठामा टिभी हेर्न बसेँ । आज मैले मन पराएको मान्छेको टिभीमा अन्तर्वार्ता थियो । उनी बोली रहेकी थिइन् । मलाई उनको हरेक शब्द, हाउभाउ, हाँसो सबैसबै मन पथ्र्यो । उनको अभिव्यक्त गर्ने विचारधाराले मलाई एउटा बाटो देखाउँथ्यो । म सधैँ उनलाई इन्स्टाग्राम, ट्वीटर, फेसबुक सबैमा पछ्याउँथे । मेरो हरेक धड्कनमा उनी थिइन् ।
शोभा ज्ञवाली १५ पुस २०७६ मंगलबार १४ मिनेट पाठ